वीरगंजको एल.एस. न्यूरो अस्पताल उपचारको नाममा सर्बसाधारणलाई ठग्दै - Birgunj City
वीरगंजको एल.एस. न्यूरो अस्पताल उपचारको नाममा सर्बसाधारणलाई ठग्दै
बिरगंज सिटी ३१ असार २०७७, बुधबार १७:४३मा प्रकाशित (१ साल अघि) १६५४९ पाठक संख्या
असार ३१ वीरगन्ज । वीरगन्जमा विरामी उपचारको नाममा निजी अस्पतालले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । उपचारका लागि आएका विरामीहरुसँग मनोमानी ढँगबाट रकम असुली गरि रहेका छन् ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि वीरगंजका निजी अस्पतालहरुले सर्वसाधारणहरुलाई सकेसम्म खुन चुसेझै निरक्षर व्यक्तिसंग पैसा असुल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
साधारणतया टाउकोमा चोट लागि उपचारका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ पानीटंकी स्थित रहेको एल.एस. न्यूरो एण्ड जेनरल हस्पिटल प्रा,लि.मा आएका एक व्यक्तिसँग अस्पतालले एक दिनमा २० हजार रुपैया असुली गरेको छ ।
सडकमा लडेर टाउकोमा चोट लागेका ६ वर्षीय बालकलाई उपचार गराउन आउँदा एक दिनमा २० हजार रुपैया तिर्नु परेको विरामीका आफन्तले बताएका छन् । बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुरस्थित घर भई शनिबार विहान सडकमा खसेर टाउकोमा चोट लागि जाँच गराउन आइतबार दिउँसो ३ बजे अस्पताल पुगेका ६ वर्षीय बालकलाई आई. सि.यू. कक्षमा राख्नुपर्ने भन्दै अस्पतालले भर्ना गरेको थियो ।
मोटरसाइकलमा बसेर आफै अस्पतालसम्म पुगेका बालकलाई आई.सि.यू.मा भर्ना गराई सिटि स्केन गर्नुका साथै सम्पूर्ण शरिरको चेकजाँच गर्नुपर्छ भन्दै अन्धाधुन्ध बिल बनाएका अस्पतालले आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्ममा २० हजार रुपैया बुझेको हो ।
अस्पतालद्वारा एउटा साधारण प्यान बिल काटेर हातले विभिन्न शिर्षकमा लागेको खर्चको विवरण लेखि विरामीका आफन्तलाई थमाइयो । एक दिनको बिल हेर्ने वित्तिकै आफन्त चकित पर्दै साधारण चोटपटक लागेको बच्चालाई यति खर्च कसरी लाग्यो भन्दा डाक्टरसाबले जे जे भन्नुभएको छ, त्यो सबै चेकजाँचको पैसा रहेको भन्दै बेतुकको जवाफ पायो ।
अस्पतालले दिएको हातले लेखेको बिललाई हेरेर नै प्रष्ट हुन्छ कि उपचारको नाममा कतिको लुटतन्त्र छ रु अस्पतालले दिएको रसिदमा आई।सि।यू। कक्षको शुल्क रु ५ हजार, डाक्टर राउण्ड शुल्क रु १ हजार ५ सय, एडमिशन शुल्क रु ५ सय २५ रुपैया, नर्सिङ्ग शुल्क रु ४ सय, ल्याब शुल्क रु ५ हजार ४५ रुपैया, अर्को डाक्टर ९जसले भर्ना गर्यो० शुल्क रु १ हजार, एक्सरे चार्ज रु ४ सय २० रुपैया, एन.सि.सि.टि. अफ ब्रेन शुल्क रु ४ हजार २ सय, इमर्जेन्सी टिकट रु ३ सय २५ रुपैया गरि रु १८ हजार ४ सय १५ रुपैयाको रकम उल्लेख छ ।
अस्पतालकै रसिद अनुसार अन्य निजी अस्पताल भन्दा सबै शुल्कमा डेढ देखि दुई गुणासम्म शुल्क बढि लिइएको देखिन्छ ।
वीरगन्जको कुनै पनि निजी अस्पतालमा एक दिनको आई।सि।यू। शुल्क रु ५ हजार छैन, २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म छ । ल्याब शुल्क कुन शुल्क हो भन्ने अस्पतालसँग पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन । ल्याब शुल्कको बारेमा बुझ्दा पुरै शरिर चेकजाँच गरे वापत शुल्क लिइएको बताउँछन् ।
चोट लाग्यो टाउकोमा त सिटि स्कयान्सम्म ठीक छ, पुरै शरिर किन चेकजाँच गर्नुपर्यो ? भनेर सोध्दा पुरै शरिर चेकजाँच विना औषधी कसरी चलाउने ?
यस्ता यस्ता विविध बहानामा अस्पतालले गरिब, असहाय, निरक्षर परिवारलाई ठगी रहेका छन् । अस्पतालमा चेकजाँच गराउन आउँदा ठेगाना हेर्ने वित्तिकै यी व्यक्तिबाट कतिसम्म पैसा असुल गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गरेर विभिन्न योजना बनाउँदै ठग्न सक्रिय छन् यस्ता अस्पतालहरु । यो त उदाहारण मात्रै हो, यहाँ अधिकाँश निजी अस्पतालले विरामी उपचार भन्दा पनि कमाउ धन्दालाई प्रशय दिएका छन् ।- कालिका टाईम्सबाट